The Anatomy of Jason Freeny's Animal Balloons | Famoronana an-tserasera
Azo antoka fa amin'ny fety fitsingerenan'ny andro nahaterahana na rehefa mandeha miaraka amin'ny fianakaviana amin'ny iray amin'ireo ivon-toeram-piantsenana ireo balaonina miendrika biby Matetika izy ireo no tadiavin'ny kely indrindra amin'ny trano. Fomba tsotra hanehoana ny karazan-biby rehetra hamelomana lanonana ary manompo an'ity mpanakanto ity ihany koa fa manana ireto andalana ireto izahay hitondra antsika ny anatomin'ireo biby ireo amin'ny fomba hafahafa amin'ny fisoloana tena azy ireo.
Ary io karazana biby ao amin'ny balaonina io dia afaka mampatsiahy anao ny fahazazanao. Teo no nitodihan'i Jason Freeny manimba ireo nofy mamy ireo nanomboka tamin'ny vao vao taona vitsy monja ianao tamin'ny fotoana nanambaranao ny anatomia izay mety ho hita ao anatin'io duck rubber na ny biby ankafizin'ny ankizy maro io. Ary i Freeny, teo aloha, dia sahy naneho tamintsika ny ao anatin'ireo kilalao vita amin'ny fingotra izay niaraka taminay tamin'ireny vanim-potoana ireny rehefa toa lavorary izao tontolo izao.
Jason mitondra antsika ireto balaonina miendrika biby ireto mba hanomezana ireo "kilalao" ireo. Freeny ary artista amerikanina izay nanomboka ho mpianatra famolavolana indostrialy ary nandritra ireo taona ireo niasa ho an'ny mtv izy, namorona sary nomerika ary indray mandeha nanjary asa ho mpamorona kilalao. Izany dia niteraka fifangaroana matanjaka tokoa hihaonana amin'ireo biby ireo izay mitondra tena ho singa tena izy toy ny anatomin'ny "zava-manan'aina".
Araka ny voalazan'i Freeny, 10 taona teo ho eo no nahalany azy alaivo vokatra be ireo kilalao ireo, koa ankehitriny ianao dia afaka mividy izany amin'ny Amazon, ny bera ary ny alika farafaharatsiny.
Manana ny pejy mankany Amazon hahazoana azy ireo amin'ity rohy ity, ny facebook-nao y ny instagram. Un asa hafahafa sy hafa izay nahita ny voany ihany nony farany afaka mivarotra azy erak'izao tontolo izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » The Anatomy of Animal Balloons Uncovered by Jason Freeny